Uyenza njani iIqweqwe leNcwadi yeNtengiso | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ukuba ubucinga ngokumilisela nayiphi na isicwangciso sokuthengisa oko kukunceda ukuba ubhengeze inkampani yakho kwaye wandise abathengi bakho, unokwenza i- ebook yiba yile nto uyifunayo. Njengoko igama lisitsho, ngu Incwadi ye-e enomxholo onolwazi malunga nesihloko esithile.
Kwaye kutheni wenza i-ebook? Ekuthengiseni, isitshixo sokuphumelela kukuba umgangatho wokuqukethwe iphethwe nendlela eziswa ngayo eluntwini. Ngelixa ulwazi olubaluleke ngakumbi nomthengi wakho malunga nenkampani yakho, kokukhona baya kuzithemba iinkonzo okanye iimveliso ozinikelayo. I-ebook ayikhawulelwanga ekubeni yiflaya okanye incwadana ngokubanzi, kodwa inika umxhasi ithuba lokwazi nzulu ukuba uwenza njani umsebenzi wakhe inkampani, zeziphi izinto eziyisebenzisayo, iimveliso zayo, njl.
Ukubonisa umxholo ngohlobo lwencwadi yedijithali yi xabiso elongezelelweyo oko kukunceda ukuba uzibeke njengenkampani ekumgangatho ophezulu. Kodwa, ekubeni sisixhobo esibaluleke kangako, kufuneka ibenomtsalane kwaye uyileke kakuhle umboniso okumema ukuba usifunde. Oko kukuthi, ikhava iya kuba sisitshixo kumthengi wakho ukuze athathe isigqibo sokuba uyafunda okanye hayi. Apha sikushiya ezinye Iingcebiso zezinto eziphambili ekufuneka zibe nazo ikhava yakho ukugqama.
2 Isihloko kunye nemithombo yolwazi
Ngokutsho kwe ubuchwephesha bengqondo, Inkqubo yobuchopho yenza umbala ngokukhawuleza kunamagama, oko kuthetha ukuba umfundi onokubakho uya kuqala aqaphele imibala oyikhethileyo, emva koko isihloko se-ebook. Ukukhetha umbala wekhava yakho Kuya kuxhomekeka kwisihloko okanye kumyalezo ofuna ukuwudlulisa. Kubalulekile ukuba dlala okanye udibanise imibala, Uyilo olunombala omnye kuphela alunakho ukutsala umdla woluntu ngokwaneleyo.
Apha sikushiya Isikhokelo kwimibala kunye neentsingiselo zazo kwisayikholoji yembala:
Ukonwaba, ithemba, amandla, ukomelela, ukuyila, ukugxila.
Ithemba, uxolo, uxanduva, ukuthembeka, ucwangco, umbono, ubungcali, inkululeko.
Ukungathathi cala, ibhalansi, ukuqina, ubungqongqo, imbeko, uzinzo, ukuzola.
Ulutsha, ukuhlalisana, ukufudumala, inkuthazo, uvuyo, ukungxamiseka, ulonwabo, amandla.
Ubungqongqo, ukomelela, amandla, ubungcali, ubungangamsha, indlela, negunya
Ubumoya, umahluko, ubunzulu, ukucamngca, ukubonakalisa, ukuthozama.
Umnqweno, amandla, isibindi, amabhongo, amandla, amandla.
Ubumnandi, ubufazi, ubuntununtunu, uthando, inkathalo, intuition.
Ukukhula, indalo, ibhalansi, ithemba, ukuzinza, ithemba, ukuphumla.
Isihloko kunye nemithombo yolwazi
Nangona kubonakala ngathi yingcebiso ecacileyo, isihloko se-ebook yakho kufuneka ichaze ngokucacileyo nangokufutshane umxholo wakho ungantoni. Ukuba amagama asetyenzisiweyo anobuchwephesha kwaye umthengi akaqhelananga nawo, okanye ukuba amagama ayabhidisa kwaye awacacanga, ngekhe bangachithi ixesha labo befunda wonke umxholo. Sebenzisa amagama ngqo asondele kangangoko kulwimi lwabathengi bakho, ngegama elinokufikeleleka.
Nje ukuba isihloko sakho, khetha iifonti oza kuzisebenzisa linyathelo elilandelayo ekufuneka ulithathile. Qiniseka ukuba ziifonti elula ekulula ukufundeka. Awunyanzelekanga ukuba usebenzise iArial okanye iTimes New Roman kodwa kukho ezinye iindlela ezinje ngeMontserrat, Gotham okanye iHelvetica ezinesitayile, ezinokufundeka nezala maxesha. Ungadlala ngesicatshulwa esibhalwe ngqindilili nangomalukeke ukuqaqambisa amagama onomdla kuwo.
I-Montserrat typography yencwadi yokuthengisa yedijithali
Ngokwesiqhelo ii-ebook ziyakhutshelwa kwiwebhusayithi yeenkampani ezifanayo, kodwa oko akuthethi ukuba akufuneki faka ilogo yakho. Ayisiyiyo eyona nto ibalulekileyo okanye ayifuni ndawo, ungayibeka njengeenyawo ngobukhulu obukhulu kwaye ungayiphinda le nto kuwo onke amaphepha omxholo wencwadi. Ekugqibeleni, okukhona umthengi ebona ilogo yakho, kokukhona baya kukukhumbula kunye nokuma okungcono oya kuba nako.
Ungabandakanya i-URL yewebhusayithi yakho ukubathumela kuyo kwaye banokuba nolwazi ngakumbi malunga nenkampani yakho.
Ilogo yenkampani MAV Marketing Digital.
Unako ukuyila ikhava ye-ebook yakho ngaphandle kwemifanekiso, kodwa ukuba uthatha isigqibo sokongeza nayiphi na eya kuyinika ixabiso ngakumbi kwaye iya kutsala umdla ngakumbi. Njengesihloko, khetha umfanekiso ohambisa umxholo kwaye, oko kukumgangatho olungileyo, Qiniseka ukuba inesisombululo se-300 dpi, kwaye ingena kakuhle kwifomathi ethe nkqo yobugcisa.
Kwaye ungalibali ukuthatha umbala wombala owusebenzisileyo ukuza kuthi ga ngoku ukuze udityaniswe kakuhle kwaye udityaniswe nomfanekiso ophambili.
Intsimbi ye-ebook yokuthengisa kwinkampani ye-MAV yeNtengiso yeDijithali.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » Yila ikhava yencwadi yokuthengisa